गोकुलको ७० करोडमा ‘प्रचण्ड’ को नाम पनि मुछियो, अब के हुन्छ ? — Imandarmedia.com
गोकुलको ७० करोडमा ‘प्रचण्ड’ को नाम पनि मुछियो, अब के हुन्छ ?
काठमाडौ। नेकपा एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोडको कथाको अदृश्य पात्र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भन्दैं यो काण्डमा उनको नाम पनि मुछेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन काभ्रेले बनेपामा शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता बाँस्कोटाले जनताले त्यसको हिसावकिताव गर्ने बताएका हुन्।
अध्यक्ष दाहालले केही दिनअघि पाँचखालमा भएको कार्यक्रममा ७० करोडको कथाको याद दिलाउँदै ओली सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाएका थिए। बाँस्कोटाले यस विषयमा आफूसँग सिधा बहस गर्नसमेत चुनौती दिएका छन। उनले तथ्यका आधारमा यस विषयमा टुँडिखेलमा, काभ्रेमा, टेलिभिजन च्यानलहरूमा बहस गर्न तयार रहेको बताए।
उनले अध्यक्ष दाहाल र आफ्नो बारेमा लागेको आरोपबारे छानविन गर्न पनि माग गरेका छन। यस्तै पूर्व मन्त्री समेत रहेका बास्कोटाले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई काभ्रेमा आफूसँग निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी विजयी हुन चुनौती दिएका छन।
पूर्व मन्त्री बास्कोटाले प्रचण्डलाई आफुमाथि र प्रचण्डमाथि लागेका आरोपहरुबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न तयार रहन चुनौती दिए। ‘२०६४ साल गई सके अध्यक्ष प्रचण्ड, सक्नुहुन्छ भने सङ्घीय निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर २ मा म सँग प्रतिस्पर्धा गर्नुस्’–पूर्व मन्त्री बास्कोटाले भने–‘आरोप लगाउँदैमा हुँदैन तपाई र म दुवैको निष्पक्ष छानबिन गर्न तयार हुनुस्।
बाँस्कोटाले माओवादी पार्टीले राजनीतिरुपमा काग्रेंसको पुच्छर समातेर समावजाद ल्याउँछु भन्दै आत्महत्या गरिसकेको बताए । ‘भौतिक रूपमा हिटलरले आत्महत्या गरे जस्तो अध्यक्ष प्रचण्ड तपाई नगर्नुस तर तपाईँको पार्टीले आत्महत्या गरिसकेको छ’–पूर्व मन्त्री बास्कोटाले भने– ‘काँग्रेसको पुच्छर समातेर बैतर्नी तर्न खोज्दैमा समाजवाद आउन सक्दैन ।’बाँस्कोटाको भनाई थियो।
श्रीमान् प्रचण्ड काभ्रेमा चुनाव लड्न आउनुस्, तथ्यमा बहस गर्नुस्, बैक लुट्नेहरू, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, पुल पड्काउनेहरूले लगाएको आरोपका सन्दर्भमा फेस टु फेस बहस गर्न तयार छु’–पूर्व मन्त्री बास्कोटाले भन्नुभयो–‘तथ्य र आधार हिन आरोप लगाउँदै नहिँड्नुस्। केही दिन एकीकृत माओवादीले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले गोकुल बास्कोटाको नाम नलिई बास्कोटाका बारेमा आलोचना गरेका थिए ।
यसैगरि, माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्ष पञ्चा सिंह बनेकी छन्। आज बिहान अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै निवास खुमलटारबाट अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्षमा पञ्चा सिंह हुने निर्णय सुनाएपछि ईतिहास रचिएको हो। अखिल क्रान्तिकारीको इतिहासमा महिला अध्यक्ष बनेको यो पहिलो पटक हो। क्रान्तिकारीको अध्यक्षमा पञ्चा सिंह र सुरेन्द्र बस्नेत मुख्य दाबेदार थिए।
अखिल क्रान्तिकारीले अध्यक्ष चयनको जिम्मा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको थियो ।नेतृत्व चयनको विषयमा छलफल गर्न अखिल क्रान्तिकारीका नेताहरु आज बिहान प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका थिए। सोही छलफलमा प्रचण्डले पञ्चालाई अध्यक्ष तोकिदिएका एक नेताले बताए। अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको जारी सम्मेलनले नेतृत्व छनोट गर्ने भएपनि अध्यक्षका आकांक्षी धेरै भएपछि सहमति जुट्न सकेको थिएन।
सहमति नजुटेपछि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई नेतृत्व छनोट गर्ने जिम्मा दिएको थियो। अनेरास्ववियुमा पन्चा सिंह र सुरेन्द्र बस्नेत प्रमुख दावेदारका रुपमा थिए ।विद्यार्थी नेताहरुसँगको छलफलबाट सहमतिमै आज नेतृत्व छानेर अखिलको सम्मेलन सकिएको छ । शनिबार नै सकिने भनेको सम्मेलन नेतृत्व छनोटमा सहमति नजुटेपछि एक दिन लम्बिएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका सभापती शेर बहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मध्यावधि निर्वाचनका लागि तयार भएका छन्। मध्यावधि भन्दा टाउको दुखाउने प्रचण्ड समेत तयार भएपछि मुख्यदलका प्रमुख नेताको विचार मिलेको हो। प्रचण्डले दह्रो बनेर एमालेकै लाईनमा उभिएपछि एमालेबाट अलग्गिएर नयाँ पार्टी खोलेका माधव नेपाललाई तनाव हुने देखिएको छ।
उनको पार्टीका नेताकार्यकर्ता निराशा छाउने देखिएको हो। संसद विघटन गरेर आगामी वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचनको मनस्थितिमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको पनि लाइन मिलेको हो। यसको झल्को प्रचण्ड स्वयं दिइरहेका छन्। शनिबार पनि प्रचण्डले यस्तै झल्को दिए । देशैभर एमालेसँग प्रतिवाद नगरी चुनाव नजितिने प्रचण्डको अर्थपूर्ण भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री देउवा पनि एमालेलाई हराउन छिटो भन्दा छिटो चुनावमा जानुपर्ने, सरकारमै बसिरहे एमालेले टाउको उठाउने मौका पाउने भन्दै परिस्थिति विश्लेषण गरिरहेका छन्। यहीँ अवस्थामा प्रचण्ड पनि एमालेलाई हराउनुपर्ने कुरा सार्वजनिक मञ्चमै बोलिरहेका छन्।खासगरी डेढ वर्षभित्र सरकारमा जाने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आत्मविश्वाससँग प्रचण्ड त्रसित देखिन्छन्। यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने उनको धारणा आइरहेको छ।
प्रतिवादभित्र मध्यावधि चुनाव एक विकल्प रहेको जानकारहरु बताउँछन्। प्रधानमन्त्री देउवा पनि वैशाखमा मध्यावधि चुनाव गर्न तत्पर छन्। आफ्नै पार्टी, प्रतिपक्षीको ग्रिन सिग्नल पाएका देउवा प्रचण्डको साथ पाएपछि थप उत्साहित भएका छन्। त्यसो त प्रचण्डले पनि चुनावी तयारी थालिसकेका छन्। गाउँ गाउँमा कार्यकर्ता सक्रिय बनाउनेतिर प्रचण्ड केन्द्रीत भएका छन्।
वाइसीएलदेखि अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीसम्म जनवर्गीय संगठनसम्म सबैलाई जागरुक गराउनतिर केन्द्रीत भएका छन्। संगठन जागरणका लागि वडादेखि राष्ट्रिय सम्मेलन पार्टीलाई अग्रसर बनाएका छन्। आफै पनि सभा सम्मेलनमा दिनहुँ सम्बोधन गर्दै हिँडेका छन्।